Cocoon Nocturne ★ NETFLIX ★ POOL ★ FIBBER ★
Macheren, Grand Est, France
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFrédéric
Xa iyi-418 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
"I-NOCTURNE COCOON" - 5 ★★★★★ kwaye entsha ngokupheleleyo!
Zonke iintuthuzelo ozidingayo ukuze uhlale kamnandi, nokuba ziintsuku ezimbalwa zokuphumla okanye uhambo lwakho lweshishini.
Ukukukhusela, yonke imiphezulu kunye nempahla yokuhlamba zibulawa iintsholongwane emva kokuhlala.
Sisebenzisa izicoci ezichwepheshile kunye nesibulali-ntsholongwane esisebenza ngokuchasene ne-COVID-19.
Ukungena ngokuzimeleyo kukhuseleko olungaphezulu, ukuguquguquka, kwaye ngenxa yoko uhambo olungenaxinzelelo.
★ Isakhiwo sihlelwe ngeenkwenkwezi ezi-5, zipholile kwaye zicocekile. Ibekwe kumgangatho osezantsi kunye nezinyuko ezimbalwa. Ngasemva kumgangatho ongaphantsi kunye nethafa entle yabucala.
Ifakwe kufutshane neSaint Avold, uya kuba sembindini we-Saar-Lor-Lux axis.
Isikhululo sikaloliwe saseSaint Avold SNCF sikumizuzu emi-5 kude.
★ Idama lokuqubha langaphandle lifudunyezwe ukuya kuma 29 degrees ukusuka ngoMeyi ukuya ekupheleni kukaSeptemba, ekuqaleni kukaOktobha kuxhomekeka kwixesha lonyaka. 3.6 nge-7 yeemitha ubude. Kunokwabelwana nathi ngamaxesha athile.
★ Ibhedi ye-Queen e-1 - Ubungakanani be-160 nge-200 yokuthuthuzela okuphezulu, kunye ne-hotel quality duvet.
★ A 140 ngo 190 isofa eguquguqukayo enomandlalo wokwenyani kunye neduvet esemgangathweni yehotele.
★ Amaphepha kunye neetawuli zibonelelwe.
★ Indawo yokupaka yabucala ephambi kwendlu.
★ I-terrace yangasese enetafile kunye nezihlalo zikulindele, kunokwenzeka ukuba ubukele ngaphandle phantsi kweenkwenkwezi kunye ne-brazier (ngesicelo).
★ Isantya esiphezulu se-Intanethi ye-WiFi enkosi kwifayibha ukudibana ne-Intanethi simahla kwaye ngokukhawuleza.
★ 55 intshi HD LED TV kunye Netflix.
★ Isidlo sakusasa kwisiza ngesicelo (Intlawulo eyongezelelweyo)
Senseo umatshini ikofu ekhoyo.
★ Ikhithi yekhitshi yokutya kwakho: ityuwa kunye nepepile, ioli yomnquma kwikhabhathi yekhitshi.
★ ithowusta emnandi eshushu nekrwada kwisidlo sakusasa.
Ioveni yeMicrowave, ioveni kunye nesitovu seceramic yesitshisi esi-3 ukulungiselela ukutya kwakho (iimbiza neepani zinikiwe). Iifluti zeChampagne kunye neeglasi zewayini zokuphucula ukutya kwakho.
★ Ijeli yeshawari yoluhlu lomntu ngamnye enikezelwayo ekufikeni kwakho.
★ Isixhobo sokomisa iinwele sobuchwephesha siyafumaneka kwikhabhathi yokuhlambela, ukuze uhambe ukukhanya.
★ Ikiti yoku-ayina ukunqanda iilokhwe ezishwabeneyo kunye neehempe.
★ Iqondo lobushushu kwiflethi lihle kakhulu xa ufika, kuba akukho nto imbi ngaphezu kwendlu enomkhenkce xa ufika kwaye kufuneka ulinde ukuba ishushu.
★ Ngesicelo naphambi kokufika kwakho, ibhedi kunye nomatrasi onazo (ibhedi yelinen ayibonelelwanga) kunye nesitulo esiphakamileyo kunye nebhafu yomntwana.
★ Ngaba ufuna ukufika kwiflethi ngaphambi kwe-5: 00 p.m.? Uhambe ngo 1pm ngosuku lokuhamba kwakho? Qhagamshelana nathi kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu.
★ Ngaba ufuna ukwenza isimanga sothando nomntu wakho omthandayo? Ibhotile epholileyo yechampagne, iwayini eswiti, ibhokisi yeetshokholethi ezimnandi, isipha seentyatyambo okanye iimacaroons ezimnandi? (intlawulo eyongezelelweyo) Sazise!
★ Sisekuqaleni kohambo lwethu lokwamkela. Ukuba unazo naziphi na iingcebiso kuzo naziphi na izixhobo, indawo yokuhlala okanye izinto ezenziwe zifumaneke, singathanda ukuva kuwe. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuphucula indawo yethu yokuhlala kubakhenkethi bexesha elizayo.
I-wifi ekhawulezayo – i-418 Mbps
Amaphandle, amasimi, ihlathi. Iindlela ezininzi zokuhamba intaba kunye neebhayisekile.
Siyaluthanda unxibelelwano nabantu. Kwaye singakuvuyela ukukukhokela ekukhetheni indawo yokutyela okanye indawo onokuthi uyindwendwele.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Macheren